အကြင်နာနန်းတော်: Nokia Hand Phone တွင် မြန်မာ Font ပေါ်ဖို့
Nokia Hand Phone တွင် မြန်မာ Font ပေါ်ဖို့
၁.nokia 5233 ကို မြန်မာဖောင့်ထည့်ခြင်လို့ပါ
Nokia ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာ ဖောင့် ပေါ်ဖို့အတွက် မောင်မိုး ရဲ့  ဘလော့ထဲမှာ ရေးသားထားချက်တွေကို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (http://blogger-mgmoe.blogspot.com/2010/04/symbianmyanmar-v30.html)
SymbianMyanmar v3(free download) at .rename sis to rar when finish donwload. It is unsigned application. Sign it ur own certificate.enjoy it.
SymbianMyanmar v3.0 ဆိုတာဘာလဲ။
SymbianMyanmar v3.0 က Nokia (နိုကီယာ) Touch screen phone တွေပေါ်မှာ မြန်မာစာကိုပထမဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Keyboard System အပါအ၀င် မြန်မာစာလုံးများကို လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အပြည့်အ၀ အသုံးချနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
This keyboard is far superior to Nokia ones. A single key can have up to5characters (you get extra chars by tapping and dragging). It has copy, cut, paste, home, end, symbols table, T9 dictionary in qwerty mode, enables type-ahead in qwerty, international chars keyboard (customized), lets you type faster with iPhone original keyboard. For each mode (landscape and portrait) there are7different keyboards (selectable fromabutton): English qwerty, international qwerty, abc keypad, numeric mode, edit mode, symbols table, dictionary selection.
ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော ဖုန်းထဲမှာသွင်းထားတဲ့ font အတွက်အသုံးပြုတဲ့ Application တွေ၊keyboard system အားလုံးကို Uninstall လုပ်ပေးရပါမယ်။
ဥပမာ-Font အတွက် fontrouter ကဲ့သို့သော font application များ၊
Keyboard အတွက် Dayhandinput ကဲ.သို့Keyboard application များ။
SymbianMyanamar က Unhackable ဖုန်းအပါအ၀င် Touch screen support လုပ်တဲ့ Nokia Brand (Symbian OS/s60 v5) တစ်ခုတည်းမှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် certificate and key ကို သက်ဆိုင်ရာ website တွေမှာ download လုပ်လိုက်ပါ။ SymbainMyanmar ကို Sign လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် install လုပ်လိုက်ပါ။
ဘာ့ကြောင့် uninstall လုပ်ပေးရတာလဲ။
SymbianMyanamar v3.0 ကလည်း font နဲ့ Keyboard application သာဖြစ်တယ်။ ဖုန်းတစ်လုံး ထဲတွင် ထို စနစ်များစွာ ရှိနေပါက boot တက်ချိန်တွင် လေးသွားသည့်အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (ဖုန်းကလုံးဝ အလုပ်မလုပ် နိုင် တဲ့အထိပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်)ထို့ ကြောင့် ထိုစနစ်များရှိနေပါက သွင်းလို့မရစေရန်ပြုလုပ်ထား ပါတယ်။သွင်းကြည့် ပါက ‘Unable to install’ ဟု ပေါ်ပါက ဖုန်းကို အရင်စစ်ကြည့်ပါ။
ဘာကြောင့် Font ထပ်တာလဲ။
မြန်မာစာတွင် Unicode မရှိသေးပါ။ယခု SymbianMyanmar v3.0 ထွက်သည့်အချိန်အထိ မြန်မာ Font အားလုံးသည် Fake Unicode သာ ဖြစ်သည်။ Standard ရှိသော Nokia ဖုန်းတွင် ထို Fake font များကြောင့် သာစာလုံးထပ်ခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာစာUnicode ဖြစ်မှသာလျှင် font များ မထပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ SymbianMyanmar တွင် စာလုံးနှစ်လုံးသာထပ်သည်။ ထိုထပ်သည့် စာလုံးများမှာ သဝေထိုး (ေ) နှင့် ရေးချ (ာ) နှစ်လုံးသာထပ်သည်။ အလွယ်ကူဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာ ‘Space bar’2ချက်စီရိုက်ကာထိုစာလုံး2လုံးကို သုံးပါ။SymbianMyanmar v3.0 တွင် SymbianMyanmar font ၊ ဇော်ဂျီ font အပြင် မြစေတီ font ကိုပါထပ်မံ ထည့်သွင်းထားသည်။
Keyboard system ကိုမကြိုက်ရင်ဘယ်လို Disible လုပ်ရမလဲ။
You can easily disable it on the settings or completely uninstall it. To disable it, go the SymbianMyanmar and on the first option of the first screen, tap and select “AknFEP”.
SymbianMyanmar font ကိုDisiblae ပြုလုပ်ခြင်း
Restore SymbianMyanmar v3.0 လုပ်ရန်
-SymbianMyanmar.rar file ထဲရှိ Edit SymbianMyanmar.sis ကို အသုံးပြုကာ ‘Restore SymbianMyanmar v3.0’ ကို ရွေး ကာ OK နှိပ်ပြီး Restore လုပ်ပါ။ Restart ချပါ။ (2 ခုလုံးမရွေးပါနှင့်။)
Restore System font လုပ်ရန်
-SymbianMyanmar.rar file ထဲရှိ Edit SymbianMyanmar.sis ကို အသုံးပြုကာ ‘Restore System font’ ကို ရွေး ကာ OK နှိပ်ပြီး restore လုပ်ပါ။ Restart ချပါ။ (2 ခုလုံးမရွေးပါနှင့်။)
SymbianMyanmar နောက် version အသစ်အတွက် စနစ်အသစ်များ ရရှိတွေ့ ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ထွက်မည့် Version အသစ်များအတွက် Software ပြုလုပ်သူများနှင့် SymbianMyanmar ကိုအကောင်းဆုံး ပြုလုပ်လိုပါတယ်။SymbianMyanmar v1 မှစပြီး v3 အထိကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းသာပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။အုပ်စုလိုက် အဖွဲ့ လိုက်လုပ်မည်ဆိုပါက ပိုမို ခရီးရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားပါက ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
SymbianMyanmar download link: (http://www.mediafire.com/?c4ajx91v4qfc9gp)
Swishmax အသုံးပြုနည်း စာအုပ်
ESET NOD32 Offline Updater 5606 (20101110)
သြ၀ါဒ ၁၀၁ ခု
သတင်းထူးများ နဲ့ ကျွန်တော်
** ဝေဆာဆဲသစ်ပင် **
HTML နဲ့ CSS Code တွေကို စမ်းသပ်ရေးသား လေ့ကျင့်ရန်...
Tetris တုံးစီသော ဂိမ်းကို အောင်နိုင်ခြင်း
Fractal ပန်းချီ - တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ပါ